Abavelisi bentsimbi kwalenza - abaXhobisi base China abenziwe ngesinyithi kunye nefektri
Isefu yentsimbi kwalenza inokumelana ngamandla nokubola. Inokuthintela umphezulu wepleyiti yentsimbi ekumelaneni kunye nokwandisa ubomi bayo benkonzo. Ngapha koko, umtya ohlanganisiweyo ukhangeleka ucocekile, umhle ngakumbi kwaye wongeza umhombiso.
Sheet intsimbi kwalenza luhlobo lwephepha lwentsimbi kunye dip eshushu kwalenza ukutyabeka kumphezulu wayo, nto leyo isetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo, izixhobo zombane zasekhaya, izithuthi kunye neenqanawa, imveliso container, njl
I-0.12mm yeCarbon Sheet yentsimbi eyenziwe ngetsimbi ye-Afrcia
Sheet zentsimbi kwalenza na uhlobo sheet incence ezenziwa ziqengqelekayo ugoba abandayo. Kufanelekile ukuhonjiswa kophahla, udonga kunye neendonga zangaphakathi nezangaphandle zezakhiwo zorhwebo nezoluntu, iindawo zokugcina iimpahla, izakhiwo ezizodwa kunye nolwakhiwo lwezindlu olunexesha elide.
I-Z275 I-coil yensimbi eqeshwe ngesipere esikhulu
Ikhoyili yentsimbi eshushu eshushu ishushu inamandla okumelana nokubola. Inokuthintela umphezulu wepleyiti yentsimbi ekumelaneni kunye nokwandisa ubomi bayo benkonzo. Ngapha koko, i-coil ye-galvanized ibonakala icocekile, intle ngakumbi kwaye yongeza umhombiso. Hot coil kwalenza intsimbi Ikhoyili yindlela yesinyithi esebenzayo anti-umhlwa, nto leyo ubukhulu becala kusetyenziswa kwizakhiwo zesinyithi kunye namaziko mveliso ezahlukeneyo. Gxobhoza iinxalenye zesinyithi esinyibilikisiweyo kwisisombululo se-zinc malunga ne-500 so, ukuze umphezulu wamalungu entsimbi uqhotyoshelwe ngumaleko we-zinc, ngaloo ndlela kufezekiswa injongo yokulwa umhlwa. Inkqubo yokudibanisa idigri eshushu: ukukha iimveliso ezigqityiweyo, ukuhlamba ngamanzi, ukongeza isisombululo soncedo, ukomisa, ukuxhoma, ukuxholisa, ukunyanga, ukucoca, ukucoca kunye nokudibanisa okushushu.